“ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´
Posted by ခင္ခ on May 21, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 33 comments
ကလေးဘဝငယ်ငယ်တုန်းက ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းမှာ ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေနဲ့ ခင်ခ တို့မိသားစု ပေါင်းစည်း ကာနေခဲ့စဉ်က မိုးရာသီ မိုးချိန်းသံတွေ လျှပ်စီးလက် တဲ့ အလင်းတွေကြားမှာ အကယ်လို့များ ပြောမရတာရှိတဲ့ အခါ ဥပမာ- အိမ်ရှေ့ လမ်းပေါ်ဆော့နေတော့ မိုးတွေ ချိန်း လျှပ်စီးလက်လို့ မိုးရွာတော့မယ့် ဟန်မှာ အဒေါ်က အိမ်ထဲဝင်တော့ ပြောပေမယ့် အဆော့မက်နေတော့ မဝင်ဖြစ်သေးရင် “အေး အေး ဆက်ဆော့နေ ခဏနေ ဒေဝေါကြီး လာ လိမ့်မယ်´´ လို့လည်းဆိုရော ဒေဝေါ ဆိုတာ ဖြူသလား မဲသလား ဘယ်လိုမှန်းမသိပေမယ့် စိတ်ထဲ ကြောက် တာ နဲ့ ဆော့တာရပ်ပြီး အိမ်ထဲဝင်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်လေးတွေက အခုလိုမိုးရာသီရောက်ခါနီးဆို ပြန်လည်က အမှတ် ရစရာလေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီအခြောက်ခံရတဲ့ ဒေဝေါကြီး ဆိုတဲ့ ဇတ်လိုက်ကျော်ပါတဲ့ ပုံပြင်လေးလည်း ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ကလေးဘဝမှာ အဲဒီ ဒေဝေါ ပုံပြင်ကို ကြားခဲ့နားထောင်ခဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ အဲဒီပုံပြင်ကို ရွာသူတစ်ယောက်က ပြန်ရေးကာပို့ပေးခဲ့ပြီး ခင်ခ ငယ်က ဦးလေး/အဒေါ်တွေပြောခဲ့တဲ့ ဒေဝေါ၊ ပြောမရတိုင်း အလန့်ခံ အခြောက်ခံခဲ့တဲ့ ဇတ်လိုက်ကျော ဒေဝေါ၊ ဘာမှန်းမသိ ခင်ခ ကြောက်ခဲ့မိတဲ့ ဒေဝေါ ဆိုတဲ့ပုံပြင် ကတော့ ဒီလိုပါ။
လယ်စောင့် တောသားလေးက.. မိုးခြိမ်းသံ ကြားတော့.. ဟာ ဒေဝေါ လာတော့မှာပဲ.. အဲ့ဒီ အချိန်မှာ သူခိုးက အိမ်ပေါ်ရောက်နေပြီ.. ဒေဝေါ ဆိုတဲ့ အသံကြားတော့ ဘာမှန်း မသိပဲ လန့်သွားတယ်။ လယ်စောင့် ကို စားဖို့ ကျား တကောင်ကလည်း သူ့ တဲ နားကို ရောက်နေတယ်.. ကျားကလည်း ဒေဝေါ ဆိုတာ ဘာကြီးလဲ ဆိုပြီး တွေးပြီး လန့်သွားတယ်။ အမှောင်ထဲမှာ သူခိုးက ဒေဝေါ ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိတော့ တခုခုဆို မဟန်ဘူး ဆိုပြီး တဲပေါ်က ခုန်ချ လိုက်တာ ကျား ရဲ့ ကျောပေါ် ကျသွားတယ်။ သူခိုးက သူ့ကို ဒေဝေါ က သယ်သွားတယ်လို့ ထင်ပြီး ကြောက်ကြောက် နဲ့ လိုက်သွားတယ်။ ကျားကလည်း သူ့ ကျောပေါ် ဒေဝေါ ရောက်နေတယ် ဆိုပြိး ကြောက်ကြောက် နဲ့ ပြေးတာ.. မိုးလင်းခါနီး အလင်းရောင် ရောက်လာမှ သူခိုးက ကျားပေါ် ရောက်နေမှန်း သိပြီး ခုန်ချပြီး ထွက်ပြေးသွားပါသတဲ့.. အဲ့ဒီ ပုံပြင်လေး ကို အကြောင်းပြုပြီး ဒေဝေါ လို့ ပြော ကြတာ။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ခင်ခ ဆိုသော အမည်နာမပေးကာ ဒီ ဂဇက်ဆိုသော ရွာမှာ မန်ဘာရွာသား အဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဖတ်ခဲ့ဖူးသမျှ နားထောင်ခဲ့ဖူးသမျှ လေ့လာခဲ့ဖူးသမျှသော အသီး အနှံ အရွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ စပ်ဆက်သော တိုင်းရင်းဆေးသုတေသီတွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကို ကောက်နုတ် ကာ မျှဝေရေးခဲ့လို့တသွယ် တကယ်ဟုတ်တာတွေကော တကယ်မဟုတ်တာတွေကော တွေးခဲ့သမျှကို စာစီကာတစ်မျိုး မြင်သမျှ ကြားသမျှတွေထဲက ဖြစ်စေချင်တာ ဖြစ်သင့်တာတွေကို တစ်ဖုံ အဲလိုတွေ ပိုစ့်တွေရေး လာခဲ့တာ ဂဇက်ရွာနဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကာလကို အခုဆိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ။
အရင်တုန်းကပေါ့ဗျာ ခင်ခ သိတဲ့အသိခေါ်မလား ယူဆချက်လို့ဘဲ ခေါ်မလား ဘယ်လိုဘဲခေါ်ခေါ် ဒီ ဂဇက် ဝက်ဆိုဒ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ သတ်မှတ်ထားတာက
4. အခြားမီဒီယာ၊ Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ၊ forwarded email မှစာများ (မူရင်းအစစ်အမှန်ကို ညွန်းဆိုခြင်းမရှိပဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်မထည့်ပဲ)တိုက်ရိုက်ကူးတင်ခွင့်မရှိ။
5. သတင်း၊စာမူတွင် မှီငြမ်းကိုးကားခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်းပါက မူလSourceနှင့် မူရင်းစာ တပိုဒ် ကိုဖော်ပြရန်။
အဲဒီတော့ ခင်ခ အခြားသူရေးတဲ့ ဆောင်းပါး၊ သတင်း တွေကို သိစေချင်တော့ ပြန်လည်မျှဝေချင်စိတ်ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးရေး၊ ဒီသတင်း ဒီဆောင်းပါးက ဘယ်သူရေးတာပါ Ref: ခရက်ဒစ်တူ ပေးပြီးတင်ခဲ့ တာပေါ့၊ ဖော်ပြပါအချက်အရလည်း အဲလိုရတယ်ထင်တာပေါ့နော့။
သို့ပေသိ ကိုဘလက်ချောရဲ့ “မိမိကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ´´ ပိုစ့်မှာ သဂျီးက အခုလိုမန့်တာ ဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျ။
မူပိုင်ခွင့်ခံစားချင်ရင်..ကမ္ဘာတန်း မှတ်ပုံတော့တင်ရမှာပါ.. စာရေးဆရာကလည်း.. သူရေးတဲ့စာ.. မှတ်ပုံတင်ရုံးပို့.. မှတ်ပုံတင်ရတာပါ..။ မှတ်ပုံတင်ရုံးက.. ဘာမှထူးမလုပ်ပါဘူး.. နေ့စွဲတပ်သိမ်းထားလိုက်တာလို့..သိထားပါတယ်..။ မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာဖြစ်လာရင်.. နေ့စွဲအရအရင်မှတ်ပုံတင်ထားသူ.. စားကြေးပေါ့…။ ရှေ့ကအရင်ရေးတာ.. နောက်ကရေးတာ.. မသိ.. မှတ်ပုံတင်နေ့နဲ့သတ်မှတ်ပုံ..ဆုံးဖြတ်ပုံရပါတယ်..
မူပိုင်ခွင့်နဲ့ပါတ်သက်ရင်.. ဥပဒေ.. တရားတဘောင်ကိစ္စ… အင်မတန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်..
သိသလောက်.. မြန်မာဇာတိနွယ်ထဲ.. မူပိုင်ခွင်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့.. ရှေ့နေလုပ်စားနေသူ.. ယူအက်စ်မှာ.. မရှိသေးပါ..
ကော်ပီရိုက်.. ပက်တန့်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့..လောစကူးသွားတက်သူတယောက်တော့.. လွန်ခဲ့တဲ့.. ၈နှစ်လောက်ကကြားဖူးတယ်..
ကျုပ်အနေနဲ့.. အတိအကျ.. နားမလည်ပါ…
သိတာကတော့.. မန်းဂဇက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲတော့.. မူပိုင်ခွင့်နဲ့ပါတ်သက်တာတွေ.. ငြိနိုင်တာတွေ.. ရှယ်တာတွေ.. ပေးတာတွေ..( ပြောလာသူ..ထောက်ပြသူ.. သတိပေးသူရှိရင်).. တင်ခွင့်မရှိပါကြောင်း…. ရယ်..။
အဲဒါကြောင့်.. ကိုပေါက်လည်း..(ဟိုးတခါပြသနာဖြစ်တော့) တင်ပြီးသားကို.. ဖျက်ပေးသွားပါတယ်..
သီချင်း.. ရုပ်ရှင်..စာပေ.. အင်တာနက်ထဲအပြင်လောကမှာ.. ပါစင်နယ်..လေ့လာဖို့.. ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တာ.. ရှားပါးလို့သိမ်းပေးဖြန့်ပေးတာ.. စသဖြင့်… (ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ) ရှယ်ခွင့်.. ဖြန့်ခွင့်.. မရှိပါ..။
သတင်း.. စာမူ.. ဓါတ်ပုံ.. တပိုဒ်.. တပုဒ်.. ရှယ်ခွင့်မရှိပါ…။
ကိုးကားမှီငြမ်းပြီးရင်.. ခရက်ဒစ်တူ.. ဆိုပြီးလည်း.. လုပ်ခွင့်မရှိပါ… အဲလိုလုပ်လို့.. မူပိုင်ခွင့်ကနေလွတ်မသွားပါ…။
လုပ်ခွင့်ထဲ.. (အင်မတန်ပါးလှပ်လှပ်ကလေး..) ဖဲယူစ့်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်..
အဲဒါမျိုး.. ဒီဟာမျိုး.. ဆိုတာတွေရှိပြီး.. အဲဒါတရားတဘောင်ဖြစ်လာရင်.. ရှေ့နေများအလုပ်ဖြစ်ပါကြောင်း…။
ဪ ဂဖက်ရွာထဲ ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်သက်တမ်းလေး ရလာကာမှာ ငါရေးခဲ့တာတွေ အများသူဌာ ဗဟုသုတ အဖြစ်သိပါစေတော့ဆိုပြီး မျှဝေခဲ့တာတွေကို အပေါ်ကသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း နားလည်ခံစားပြီး ရေးခဲ့တာပါ အခုလို ခရက်ဒစ်တူ လို့ ပေးပြီးလည်း တင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ ရေးတာလည်း ရေးခဲ့ပြီးပြီ ဖတ်တဲ့ သူတွေလည်းဖတ်ခဲ့ပြီးပြီ အခုထိတော့ ခင်ခ ကို ပြဿနာရှာတဲ့သူတော့ တစ်ယောက်သလေမရှိပေမယ့် သဂျီး မန့်ချက်အရ အခုတော့ ဘယ်ကနေ ဘယ်အချိန် ဘယ်လိုပေါ်လာမှန်းမသိ ငယ်ငယ်ကကြောက်ခဲ့တဲ့ ဒေဝေါကြီး ကို စိတ်ထဲတွေးထင်ကြောက်သလို မူပိုင်ဆိုတဲ့ ဒေဝေါကြီး ကို ကြောက်ရပြန်ပြီပေါ့ တစ်ခါ။
ထိုတော့ကာ ခင်ခ အနေနဲ့ မူပိုင် ဒေဝေါကြီး ကို ကြောက်လွန်လွန်းလို့ ဘဲ အောက်ပါတိုင်း ကောက်ချက်ချကာ ရွာအပြင် ဇနပုဒ်တဲလေးရဲ့ရှေ့ကပြင်ကွပ်ပျစ်လေးမှာ လက်ပေါ်နဖူးတင်ပြီး အေးရာအေးကြောင်း အိပ်တော့မယ် ဗျို့၊ အဲ မူပိုင်ဆိုတဲ့ ဒေဝေါကြီး လာရင်တော့ သတိပေးကာ နိုးပါအုံးနော် ပြေးချင်လွန်းလို့ပါ။
Admin Kai says သတင်း.. စာမူ.. ဓါတ်ပုံ.. တပိုဒ်.. တပုဒ်.. ရှယ်ခွင့်မရှိပါ…။
ကိုးကားမှီငြမ်းပြီးရင်.. ခရက်ဒစ်တူ.. ဆိုပြီးလည်း.. လုပ်ခွင့်မရှိပါ… အဲလိုလုပ်လို့.. မူပိုင်ခွင့်ကနေလွတ်မသွားပါ…။)
ခင်ခရေး = ကိုယ်ပိုင်အတွေး ကိုယ်ပိုင်အရေး ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်ပိုင်မူ ဖြင့် ရေးကြကုန်ရာ၏။
ဖြန့်ချီ မျှဝေ အသိပေး တဆင့်လေးတွေ ကင်းကြကုန်ရ၏။
ဤကား ဂဇက်ဝက်ဆိုဒ် အလိုတည်း…….။
(ကိုယ်တိုင်အတွေး ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်ပိုင်အရေး ဖြစ်ပါ၏)
ဒေဝေါကဖြင့် ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ကလဲကြောက်သလို ကျွန်မသားလဲကြောက်တုန်း။ ငယ်ငယ်က ဒေဝေါဆိုတာနဲ့ သိပ်ရခက်တဲ့ကလေး အိပ်ရာထဲပြေးဝင်အိပ်တော့တာပဲ။ အဲဒါကြောင့် နေ့ခင်း ထမင်းစားပြီးသူအိပ်ချိန်ဆို မိုးခြိမ်းပါစေဆုတောင်းနေရတာ။ အခု ကိုခင်ခပြောတဲ့ဒေဝေါဖြင့်တော့ လာခိုင်းရင်ကောင်းမလား နှင်ထုပ်ရင်ကောင်းမလား မသိတော့ပါဘူး။ ဟိုတလောလေးကပဲ မူပိုင်ခွင့်ဆိုပီး ဖွဘွတ်မှာ ပြသနာတက်သွားပါသေးလား။ အဆိုတော်ဂျီလတ်က သူ့သီချင်းကို ခွင့်မတောင်းပဲဆိုတဲ့ ရဲသွေးနောင်ဆိုတဲ့ တက်သစ်စလေးကို တရားစွဲမယ်ဆိုလားဘာဆိုလား။ ကိုယ်လဲမသိပါဘူး။ ရမ်းသမ်းပြီး အဲဒီဂျီလတ်သီချင်းက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လားလို့ဝင်လျှာရှည်လိုက်မိတာ အဲဒီမှာကွဲတာပဲ။ ပထမနှစ်ကျောင်း သား လေးတစ်ယောက်က အောက်ကနေ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဒီလိုလေးပြန်ပြောသွားတယ်။
“နင်က ရဲသွေးနောင်မယားလား။ မူပိုင်ခွင့် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေပြောနေရအောင်။ နင်သိလား စင်္ကာပူမှာ အာဒံ ဧဝ ဒသ ဆိုတဲ့ကားမှာ ချမ်းချမ်းဆိုတဲ့သီချင်းမူပိုင်ခွင့်နဲ့ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးလျှော်လိုက်ရတာ။ အဲဒီမူပိုင်ခွင့်ပိုက်ဆံတွေကို နင့်လင်စစ်အစိုးရတွေပဲ ဒေါ်လာသိန်းချီပေးနိုင်မယ်။ ငါတို့ကတော့ မပေးနိုင်ဘူး။ ငါတို့နိုင်ငံထဲမှာ ငါတို့ဟာငါတို့ခူးကူးမယ်။ ခိုးဆိုမယ်ဘာဖြစ်လဲ ” တဲ့။
အဲတော့ မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာကတော့ ဒီနိုင်ငံမှာ အခုမှစလုံရေစတုန်းမို့ တော်တော်တော့လုပ်ယူရအုံးမယ်ထင် ပါတယ်။ မိုက်ကယ်လန်းကြီးတောင် သူ့သီချင်းတွေပြန်ဆိုတာဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ ပြောသွားတာမို့ ဒီနိုင်ငံဟာ သနားစရာကောင်းနေတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်မြင်နေကြဆဲပဲဆိုတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာလား ဂုဏ်ယူရမှာလား ကိုခင်ခရယ်။
ကျွန်မကတော့ သားအရွယ်လောက်ကလေးက ပေးစားခံလိုက်ရတယ်။ ထိချက်ပြင်းဘိ။
ကနဦးမန့်ချက်ပေးသူ TNA ရေ ကျေးဇူးပါလို့ ပြောပါရစေ။
ဟိုအကိုကြီး မူပိုင် ကို ဟို အမကြီး က ဝယ်လိုက်လို့ ဟိုအမကြီးရဲ့ မူပိုင် ဖြစ်သွားပြီတို့………
အဲဒီလို အဲဒီလို တွေလည်း လာပါလိမ့်မယ် ရွှေကျီးညို မနက်လာမှာ လားဆို နေ့လည်ရောက်မှာ လားဆို ညနေခင်း လာမှာလားဆို မျှော်ဘဲနေရှာသလို ………….. အဲ သီချင်းနဲ့ရောကုန်ပြီဗျ။
အဟီး .. အစ်မသဲ …လန်ထွက်နေဒါဗြဲ … ထိချက်က ပြင်းလှချည်လား … ဖတ်ပြီးတောင် … နည်းနည်းကြောက်သွားတယ် … ဒီလောက်ကော့မန့်နဲ့ .. ဒီလောက်ထိ ရိုင်းပြစရာမှ မလိုအပ်သေးတာ … ။
မူပိုင်ခွင့်အကြောင်းနှိုက်ပြီဆိုလျှင် … အဝှာတွေဆီက .. သီချင်းသံစဉ်ကို .. အဝှာစာသားသွင်းပြီး … အဝှာတို့ ပေါပေါသီသီပျံဆိုနေတာကျတော့ … ငြိမ်ကုပ်ဘီး နားထောင်နေကြတယ် … ။ အိုက်ဒါတွေဆိုဘီး နာမည်ကြီးလာတဲ့ .. အဆိုဒေါ်တွေ .. ဒုနဲ့ဒေး… ဟေးဟေး … ။ ကမ်ဘာရီး နှစ်ဆယ့်သုံး နှစ်ပိုင်း တပိုင်း ဒီဂရီစောင်းဘီးလည်နေတာ .. ကြာဘီဗြဲ …. အာဟိ …
အေးပေါ့အေ။ ကော်ပီအဆိုတော်တွေက ဒီတခွန်းထဲနဲ့လဲနာတယ်အေ့။ သူတို့က သူများဟာသာခိုး ထားတာ သူတို့ဟာခိုးတော့ကျနာတယ်လေအေ။ အဲတော့အဲလိုလေးမေးလိုက်တော့ ထိသွား တာ နေမှာပေါ့။ တယောက်ကများဆိုလာသေး
” ကော်ပီဆိုပီး အထင်မသေးပါနဲ့။ ကော်ပီလုပ်ရတာလွယ်တယ်များမှတ်နေလား။ စာသားရှာ ရသေးတယ်။ သံဇဉ်တွေချရေးရသေးတယ်။ တေးသံသွင်းမှာ ရီကောဒင်းလုပ်ရသေးတယ်။ တီးဝိုင်းကလဲ တီးပေးရသေးတယ် ” တဲ့။
ခုတလော ဟော့အစ်ရှူးဖြစ်နေတဲ့ ကော်ပီရိုက်ကိစ္စကိုး…
ဝင်ဖတ်သွားပြီး ဘာမှ ထပ်မဖြည့်စွက်တော့ပါဘူး … သဂျီးအစဆွဲထုတ်လာတဲ့ Fair Use ကိစ္စကို
လေ့လာနားလည်သဘောပေါက်ရင် ဒေဝေါကို အဲ့သလောက် ကြောက်စရာမလိုဘူး ထင်ပါတယ်ဗျို့ …။
လိုကယ်လိုင်စင် တွေဆိုတာလည်း ရှိသေးသဗျ…
ဖန်တီးသူ နဲ့ သုံးစွဲသူ အပြင် အစိုးရပိုင်းကလည်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုသေးသပေါ့လေ…။
ပေးတန်င့် ဘက်ရော တခါတည်း ဆက်မဆွဲချင်ဝူးလားဟင်င်င်င်င်င်င်င်င်
ဥခင်ခဂျီး ပေါမှ ငယ်ငယ်က အဖြစ်ကို ပြန်သတိရသွားတယ်
ငယ်ငယ်ကဆို ဒေဝေါ ဆိုတာ ကြောက်တာ ကြောက်နေရတာ
ဘာဂျီးမှန်းကို မသိဘူး …
ပြီးတော့ ရှိသေးတယ် … “နဂါး” တဲ့ ….
အမောက်ထောင်ထောင်နဲ့ ကြောက်စရာကြီးပေါ့ဗျာ …
ကျုပ်တို့ ရွာရဲ့ တောင်ဘက် မှာ “နဂါးရွာ” ဆိုတာ ရှိသေးတယ် …
လူကြီးတွေက ကျုပ်တို့ကို ပြောမရရင် ဘယ်လို ခြောက်တုန်းဆိုတော့ …
“ဟေ့ .. ကလေးတွေ၊ ရွာ့တောင်ဘက်မှာ နဂါး ပေါ်လို့တဲ့နော်” ဆိုပြီး ခြောက်ပါလေရော …
ဒီအခါ ကြောက်လို့ ပြေးလိုက်ရတာ တန်းနေတာပဲ ….
ပြီးတော့ “လူသုံးယောက် မျက်စိခြောက်လုံး ဝင်လာလို့” ဆိုပြီး ခြောက်တာလည်း ကြုံရသေးဗျာ …
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ မျက်စိ ခြောက်လုံးနဲ့ ကြောက်စရာ လူကြီးဆိုပြီး ရမ်းကြောက်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာ ..
နောက်ပိုင်းမှ “ဟာကွာ” ဆိုပြီး ဖြစ်သွားရတယ် ….။
မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရင် ခိုးကူးခွေပဲ ဝယ်ကြည့်ရတာပါပဲ………
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှေ.မှာ ဖော်ရိန်နာတွေ ခွေဝယ်နေတာ တန်းကို စီလို…………
တော်ပါပြီ ကလေးကလေးနေရာနေတာပဲကောင်းတယ်……………. အာဟိ
ဒီမှာတော့ ကလေးအကြံပေး အဲ ကလေးအားပေးပုံလေးတော့ သဘောကျမိတယ်ဗျ။
ကိုရွှေတိုက်စိုး ပြောတော့လည်း အဟုတ်ပါလားနော်။
မြန်မာပြည်က ဥပဒေတချို ့က သောက်မြင်ကပ်ရင်ဖမ်းဖို ့လုပ်ထားသလိုပါ
အယ်ဒီတာပြောတဲ့စကားမှာ (ထောက်ပြသူ ရှိရင်), လို ့ဆိုထားလို ့
မထောက်ပြရင် ရတယ်ဆိုတဲ့သဘော ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အယ်ဒီတာလည်း မြန်မာပြည်မှာမွေးခဲ့တာကြောင့် မြန်မာ့ဥပဒေများလို
ဖဲယူ ့စ် ကို ပြောရင် အငြင်းအခုန်တွေများပါတယ်
ကျွန်တော့်ဝတ္ထုတွေဟာ ကမ္ဘာကျော် စုံထောက်ဝတ္ထု တချို ့ရဲ့ တစ်ကွက်တလေကို
တစ်ချို ့ကို လည်း ရှေးဆရာကြီးများက စီးပွားဖြစ် ရေးသားထုတ်ဝေ လို ့
သူတို ့ရေးခဲ့တာက တစ်ပုဒ်လုံးနီးပါး ။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာလည်း ပုံတူကူးကြပါတယ် ။
အဲ့လိုရှေးက သေသွားသူတို ့ရဲ့စာဆိုရင် ခွင့်တောင်းဖို ့ခက်ပါတယ်
ဘာသာပြန် ဆောင်းပါးတွေ အကုန်လုံး ငြိကုန်မှာပေါ့နော်
မူပိုင်ရှင်မဂျီး မမခိုင် လာဘီ။
(ဘာရယ်ဟုတ်ဘူး။ ကြောက်တဲ့ လူမို့ လာ ခြိမ်းခြောက်သွားတာ)
မူပိုင် ဆိုရာမှာ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ် ကိုခရေ။
တစ်ခု က ကော်မာရှယ် အတွက် ရေးတာ မို့ သူတို့ ထုတ်ကုန် (သီချင်း၊ ပုံ၊ စာ၊ software အားလုံး) တွေကို ပိုက်ဆံပေးမှ သုံးခွင့်ပေးတာ။
တစ်ခု ကတော့ ကိုယ်က ဖန်တီးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို က အများ သုံးချင်သလို သုံးဖို့။ ပြန့်လေ ပိုပြီး ကြိုက်လေပေါ့။
ဒါကတော့ ကိုယ်ကြိုက်ရင် လူတွေ အသုံးတည့်တယ်ထင်ရင် ဖြန့် ကိုဖြန့်ပေါ့။
အိုင်တီမှာတောင် နည်းပညာ မူပိုင် ဆိုတာကို မုန်းကြတဲ့ သူတွေက ဆိုပြီး တွေ Open Source software ထုတ်ပြီး လူတွေကို ကြိုက်သလို ကူးစေ၊ သုံးစေတာပါဘဲ။
ဝင်းဒိုး ကတော့ ကော်ပီလုပ်ခွင့်မရှိ အောင် ခြိမ်းခြောက်ထားတာလေ။
ကိုခ ရဲ့ တင်တဲ့ စာတွေက ရေးသူက တောင် ဒီလိုဖြန့်ပေးတာ ကျေးဇူးတောင်တင်မှာပါ။
ရွာထဲ မှာ တင်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖတ်စာ ဆိုရင် ဖြန့်ပေးသူတွေ ကိုတောင် ကျုပ်က ကျေးဇူး ဆပ်သင့်တာကလား။
လူအများ ကို ဖတ်စေချင်လွန်းလို့ လေ။
အရီးရဲ့ အားပေးစကားကြားရတာ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
စာအုပ်တစ်ခုကို ထုတ်ဝေလိုက်တယ် အဲဒီစာအုပ်ကို တတ်နိုင်တဲ့သူက ဝယ်ဖတ်တယ်၊ မတတ်နိုင်တဲ့သူက ဌားဖတ်ကြတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ခုရှိတာ ဝယ်လိုက်တဲ့သူက အဲဒီစာအုပ်ကို သတ်မှတ်တန်ရာ တန်ကြေး ပေးပြီးဝယ်လိုက်တာမို့ သူအနေနဲ့ အဲဒီစာအုပ်ကို ပြန်လည်ဝေဌ လိုက်ဖတ်စေတယ်။ ဒီလို ဖြန့်ဝေတာမျိုးက(အခကြေးငွေမယူဘူးနော်) မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက် သူလို့ ပြောလို့ရလား။ မရဘူးနော် သူက စာအုပ်ရဲ့ တန်ရာတန်ကြေးကို ပေးခဲ့ပြီးသားပါ။ အဲ အခကြေးငွေယူပြီး ဖြန့်ဝေခြင်း စီးပွားရှာခြင်းမှသာ မူပိုင်ဆိုတာနဲ့ ညှိမယ်ထင်ပါ၏။ စာပေဖြန့်ချီရောင်းချရေး ဘက်ကပြောတာပါ။
“Good artists copy. Great artists steal.” — Pablo Picasso.
အဲ့တုန်းက သူတို့ဆီမှာ ကော်ပီရိုက်မရှိလို့ ပြောခဲ့ပုံပဲ…
အဲ့သည့်ထဲမှာ ဒါလေး သွားတွေ့လို့
the Supreme Court recognized parody asapotential fair use, even when done for profit.
အော်.. တယော်ကင်ပွန်းဘက် စိတ်လည်သွားပြန်ပါဘီဗျာ…
ဘာမှန်းမသိတဲ့ဒေဝေါကိုကြောက်နေမယ့်အစား… စိုက်ပျိုးရေးမှာအကျိုးများမယ့်ဒေဝေါကို ကြိုဆိုရမှာပါ…
အဲဒီလိုပဲ ဘာမှန်းမသိတဲ့ကော်ပီရိုက်ကိုလန့်နေမယ့်အစား… ဘာမှန်းသိအောင်လုပ်ပြီး သူ့အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရအောင်လုပ်ရမှာပါ…
လောလောဆယ် နိုင်ငံတကာကော်ပီရိုက်ကို အကန့်ကိုခဏလေးထားပြီး
မြန်မာနိုင်ငံက စာရေးဆရာတွေ… Best Seller ဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာတွေ…
လုံလောက်အောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ စာရေးလို့ရတဲ့ဝင်ငွေဟာ ဝမ်းစာမပူရအောင် ရေးချင်တဲ့စာပဲကုန်းရေးလို့ရအောင် လုံလောက်တဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပြီလား…
အဲဒီလို မလုံလောက်ရာက ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ အပေါစားစာပေတွေထွက်လာတယ်…
အဲဒါဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့လုံလောက်တဲ့ဝင်ငွေကို မရလို့ပါဘဲ…
ဒါဟာ စာပေလောကတင်မက… ဂီတလောက… ရုပ်ရှင်လောက အတူတူခံစားနေရတဲ့ နာတာရှည်ဝေဒနာပါ…
အဲဒီနာတာရှည်ကို ထပ်သတ်လိုက်တာက ခိုးကူးပါ…
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အော်နေတဲ့ ခိုးကူးပါ…
ရှိစုမဲ့စုကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုလေးတွေကို ခိုးကူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ လက်ကျန်အပင်ပေါက်ကို ပြုတ်တို့လိုက်သလို…
အဲဒီတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာခဲ့ပြီ… ရင်ကိုထိသော… စာပေတွေ… ဂီတတွေ… ရုပ်ရှင်တွေ…
အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာ ရာခိုင်းနှုန်းတစ်ချို့နေရာယူထားပါတယ်…
အဲဒီလိုပဲ နိုင်ငံ့ဈေးကွက်အပြင်ထွက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကို ဈေးကွက်တင်ဖို့နေရာမှာ…
နိုင်ငံတကာရဲ့ ကော်ပီရိုက်ကို ကျွန်တော်တို့ ဂရုမစိုက်လို့မရတော့ပါဘူး…
အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်… ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်ရဲ့ဖန်တီးမှုကို နိုင်ငံတကာကိုချပြဖို့ အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလား…
ကျွန်တော်တို့ အခုလိုပဲ ဝါးလုံးခေါင်းထဲမှာ မီးလုံးထွန်းနေတော့မျာလားလို့မေးရမလိုဖြစ်နေပြန်ပြီ…
လေးပေါက်ပေးထားတဲ့လင့်လေးတွေကို ကျွန်တော်ကြည့်ပြီး ရှာဖွေစုဆောင်းပေးနိုင်သူတွေကို လေးစားပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့အမြင်လေးတစ်ခုက ဆိုင်ရာလူတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်…
မွန်းအောင်ရဲ့ စီးရီးတစ်ခုကို MP3 တစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က Free Share မလုပ်ဘဲ…
ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ အခကြေးငွေနဲ့ Share လုပ်… ရတဲ့အမြတ်ငွေကို မူပိုင်ခွင့်ရှိသူကို ခွဲပေးတာမျိုးလုပ်နိုင်ရင်…
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေတ်ဟောင်းက ဖန်တီးသူတွေလဲ အကျိုးအမြတ်ရ… ထိန်းသိမ်းပေးသူတွေလဲ…
ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ ဘတ်ဂျက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ လှုပ်ရှားစေချင်ပါတယ်…
ဒါက ရိုးသားစွာ ကျွန်တော်ပေးတဲ့အကြံပါ…
အဲဒီတော့ သီချင်းကိုနားထောင်ကြသူတွေလဲ မိမိတန်ဖိုးထားတဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့
ဖန်တီးမှုကို ပိုပြီးတော့ အလေးထားရာရောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်…
အဲဒီလိုပဲ… နိုင်ငံတကာကော်ပီရိုက်ကို အလေးထားလိုက်ခြင်းအားဖြင့်…
နိုင်ငံတွင်းမှာ ကော်ပီသံစဉ်ထက် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်အလန်းစားတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ရင်ထဲထိုးဖောက်နိုင်ဖို့
ကြိုးစားကြပါလိမ့်မယ်… အဲဒီမှာ အခုထက်ပိုပြီး အဆင့်အတန်းရှိသော…
ပိုမိုသာလွန်သော ဖန်တီးမှုအရည်အသွေးကို ရပါလိမ့်မယ်…
ဒါဆိုရင် ကော်ပီရိုက်ဆိုတာ ကြောက်စရာမလိုတော့ပါဘူး…
ကော်ပီရိုက်ရှိလို့ လမ်းဘေးက နိုင်ငံတကာ ဒီဗီဒီတွေမကြည့်ရတော့ဘူးဆိုပြီး ဝမ်းမနည်းပါနဲ့…
ရုပ်ရှင်ရုံမှာ သွားကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်… အဲဒီအတွက် ရုပ်ရှင်ရုံတွေအခုထက်ပိုပြီး ဝင်ငွေတိုးလာမှာပါ…
ပိုကောင်းတဲ့ Service တွေရလာမှာပါ…
ခိုးကူးခွေရောင်းတဲ့လူတွေ စီးပွားပျက်သွားတာတော့ ထည့်မပြောပါနဲ့… တခြားအလုပ်ရှာလုပ်ကြပေါ့…
ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ကော်ပီရိုက်ဆိုတာ ဒေဝေါကြောက်စရာမဟုတ်ပါ…
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လိုလိုလားလား ဖန်တီးယူရမယ့်အရာပါ…
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီကို တောင့်တသလို တောင့်တရမယ့်အရာပါ…
အဲဒီအပြင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အစိုးရက တာဝန်ယူရမှာမို့ အစိုးရလဲအခွန်ရ…
ပြသနာတက်ရင် ရှေ့နေတွေ… တရားရုံးတွေလဲ အလုပ်ရမှာမို့…
အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ကော်ပီရိုက်အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဥပဒေ၊ အရေးယူမှု ဆိုတာတွေ
ဒါပေမယ့် ခိုးကူးနဲ့စားသာနေတာပဲဆိုပြီး… ငွေကြေးသက်သာတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုထည်း အတွက်နဲ့တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ စာပေလောကတစ်ခုလုံး ချွတ်ချုံကျမယ့်ဘဝကိုတွန်းမချစေချင်ပါဘူး…
အဲဒီတော့ ကော်ပီရိုက်ဆိုတာကို ဖြစ်အောင်တဖြည်းဖြည်းဖန်တီးရင်းက ပိုကောင်းမယ့်ဘဝကို…
ရဲရဲတင်းတင်းပြောင်းလဲ CHANGE ကြပါလို့… ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
CHANGE တိုင်းမှာတော့ စစချင်း….
ပြောင်းလဲဖို့မလွယ်ကူတာတွေ Physically ရော mentally မှာရော ရှိစမြဲပေါ့လေ။
ဒီလိုပဲ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ပြောင်းလဲရမပေါ့။
နိုင်ငံတကာမှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေက အကျိုးမဲ့တော့လည်းဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။
အရင်ကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံလေးထဲက တံခါးလေးပိတ်ပြီး လုပ်ချင်လာလုပ်နေတာ နေလို့ကောင်းပေမဲ့လည်း ခု စပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း ပွင့်လင်းလာတဲ့ ခေတ်မှာ ဂရုမစိုက် နေလို့လည်း မရတော့တာအမှန်။
ကိုယ်တိုင်လည်း ဆင်ခြင်မှပဲလို့ အသိသွင်းထားပါတယ်။
ဟိုတလောက Jason Mraz လာတော့ အတူ ဆိုမဲ့ မြန်မာ အဆိုတော်တွေ ရွေးရာမှာ ကိုယ်ပိုင် သီချင်းမရှိတဲ့လူတွေ စစ်ချလိုက်တော့ ဆိုနိုင်သူ အဆိုရှင်တွေ သီချင်းမရှိလို့ မဆိုလိုက်တာမျိုးလည်း ရှိသေး။
ကျန်တဲ့ အဖက်ဖက် မှာလည်း ရှိသေးတယ်။
ကမ္ဘာရင်ဘောင်တန်းပြီ ဆိုလို့ရှိရင် မဟုတ်တဲ့ နေရာတွေက စ ကြလွန်းလို့ ဒီ စကားကိုလည်း သိပ်မသုံးရဲတာ။
မိုက်ကယ်လန်းလာတော့… IC မပါဘဲ… Emperor ပါသွားတာလားဟင်…ခိခိ
အဲဒီမှာ ကိုညီထွဋ်က လူသီချင်းတွေဆိုသွားတယ်… (အရင်တုန်းဆိုတာလူသီချင်းမဟုတ်သလိုဖြစ်သွားလားမသိ…)
ခင်ခက မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာကို ကြောက်နေရင် စာတောင်မရေးပါဘူးဗျ၊ အခုဟာက Do & Don’t (Rules)ထဲက ၄-၅ နဲ့ သဂျီး မန့်ပြီးပြောတဲ့ စကားနဲ့က ကွဲလွဲနေတော့ ဘာကိုအတည်ယူပြီး ဒီဝက်ဆိုဒ်မှာ စာရေးရမလဲ သိချင်တာပါ။
ဒီကိစ္စကတော့ သိပ်နားမလည် ….
ဟိုတလောကတောင် စာလေးတပုဒ် သိပ်ကြိုက်လွန်းလို့ ကော်ပီ/ပေ့စ် လုပ်ဖူးတယ် တခါတည်းဆို တခါတည်း … အရင်ကဆို ကိုယ်ပိုင်ရေးတောင် သူများရေးတာကူးသလို ပြောသလို လုပ်တတ်တယ် အဲ့ပို့စ်မှာတောင် ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ဝင်ရေးရင် သူများ အနှစ်သာရပျက်မှာ စိုးလို့ ဒီအတိုင်း share ခဲ့ဖူးတယ်
ဆိုတော့ ကိုခကို ဘောင်လွတ်တဲ့ အကြံပေးမယ်（ကြပ်တာ）
ကိုယ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ပို့စ်(ဝါ)စာတပုဒ်တွေ့ရင် ဂဇတ်မှာ ဒါမျိုးလေးရေး ကျနော်တော့ သိပ်ကြိုက်သဗျို့ ခင်ညားတို့လဲ ဖတ်စေချင်တယ် သွားဖတ်ကြည့်ဂျ ရော့အင့် 。。。。http://www.myanmargazette.net/176657 ဆိုပီး အဲ့လိုသာ ပေးလိုက် 。。。 ကွိ ကွိ ..
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်အောင် …. တခါတလေ သဂျီးက ကြောင်ရုပ်ကို ခဲဆွဲပေးတတ်တယ် အဲ့ဒါ သူ့ဝါသနာ
ကိုကြောင်ဝတုတ် ရဲ့ CHANGE ကွန်မန့်
KZ ရဲ့ ဒီလိုပဲ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ပြောင်းလဲရမပေါ့။
နိုင်ငံတကာမှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေက အကျိုးမဲ့တော့လည်းဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။ ဆိုတဲ့ ကွန်မန့်
ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးရဲ့ ဟိုရှောင်ဒီရှောင် ကွန်မန့် တွေ ကိုဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ရေးသူတွေ ကို ကျေးဇူးပါဗျို့။
ဂဇက်မှာ သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ Do & Don’t (Rules)ရဲ့ အမှတ်စဉ် ၄ နဲ့ ၅ အချက်နဲ့ သဂျီ ပိုစ့်တစ်ခုမှာ မန့်တဲ့ အချက်တစ်ခုက ကွာဟနေလို့ ကျွန်တော်က မူပိုင်ဆိုတဲ့ ဒေဝေါကြီး ကိုကြောက်ဟန်အတွေးနဲ့ ခနဲ့စာရေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဝက်ဆိုဒ်က သဂျီးက Admin မို့ နောင် ဂဇက်မှာစာရေးရင် Do & Don’t (Rules)ရဲ့ အမှတ်စဉ် ၄ နဲ့ ၅ အချက်က အတည်ဘဲလား သတင်း.. စာမူ.. ဓါတ်ပုံ.. တပိုဒ်.. တပုဒ်.. ရှယ်ခွင့်မရှိပါ…။ကိုးကားမှီငြမ်းပြီးရင်.. ခရက်ဒစ်တူ.. ဆိုပြီးလည်း.. လုပ်ခွင့်မရှိပါ…ဆိုတာက အတည်ဘဲလား? ဘာလဲ???? ကျွန်တော်တို့ စာရေးသူတွေက ဘယ်ဟာကို လိုက်နာရမှာလဲ ??? အဲဒါကိုသိချင်တာဗျ။
ဪ ကိုခရယ် ပြောခဲ့ပီးပီကော ….
တခါတလေ ပေါင်မှာထိုးမဲ့ ကြောင်ရုပ်မှာ ခဲဆွဲပေးတတ်တယ်လို့ …..
သူလဲ ပုထုဇဉ်နီကိုရဲမို့ တမင်လွဲတာရှိသလို အမှတ်မဲ့လွဲတာလဲ ရှိပေမပေါ့ …
ဘယ်အရာမှ အတည်ယူလို့မရ (ကိုယ်တွေ့မို့ ) နားလည်မှုပေးခြင်းသည် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာစေ၏
အောင်မယ် ၊ အောင်မယ်။
စိတ်ကောင်း ဝင်နေပါလား ဟေ့။
နားလည်ချင်ရင်… Fair use ကိုဖတ်ပါဆိုနေမှ…နေမှ.. :harr:
Fair use isalimitation and exception to the exclusive right granted by copyright law to the author ofacreative work. In United States copyright law, fair use isa…
Fair use (US trademark law) – Balancing test – Category:Fair use
The distinction between what is fair use and what is infringement inaparticular case will not always be clear or easily defined. There is no specific number of …
fairuse.stanford.edu › Copyright and Fair Use Overview‎
Fair use isacopyright principle based on the belief that the public is entitled to freely use portions of copyrighted materials for purposes of commentary and …
စေတနာ အားလွန် သွားသပေါ့
ကျွန်တော်ကတော့ ဂလိုပဲ မြင်သွားပါတယ်ဗျာ
မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နဲ့သာ လုပ်ကြပါစို့
“မြန်မာဆိုတော့ မြန်မာလဘက်ရည် ကြိုက်တာပေါ့´´
ဘာရယ်လို့ဟုတ်ဘူး ကြော်ငြာထဲ့ကြည့်တာပါ ကိုမာဃရေ။
အားလုံး အားလုံးဗျာ ကျေးဇူးပါလို့။
ခိုးတာကို ခိုးမှန်းမသိအောင် ခိုးချတတ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ ..
ကျွန်မတို့ ပညာရေးလောကမှာ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဆင့်ကာဆင့်ကာ ခိုးချရင်း အကြံတူ နောက်လူသာစမြဲဖြစ်ခဲ့တာ ထုံးစံတစ်ခုလို ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ ..
အလုပ်ထဲမှာလဲ အတူတူပဲ … အိုင်ဒီယာ အဟောင်းပေါ်မှာ အခြေခံပြီး အိုင်ဒီယာအသစ် (မတိမ်းမယိမ်း) တစ်ခု ထပ်ထုတ်ကြရတာပဲ …
ဒါပေမယ့် ပိရိဖို့တော့ လိုတယ် ..
အားလုံးဝိုင်းဆွေးနွေးကြတော့ ဗဟုသုတပိုရတာပေါ့ဗျာ..ကျုပ်ကတော့ မူလဘူတ
ဂဇက်မှာ သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ Do & Don’t (Rules)ရဲ့ အမှတ်စဉ် ၄ နဲ့ ၅ အချက်တွေကိုပဲအတည်ယူမယ်။
ကိုကြီးမိုက်ရေ Do & Don’t (Rules)ရဲ့ အမှတ်စဉ် ၄ နဲ့ ၅ ကို လက်ရှိအတိုင်းမပြောင်းလဲသရွှေ့ အတည်ယူရမှာပါ။ အဲဒီအတိုင်းမဟုတ်တော့ရင် ထိုအချက်ထဲက စာသားတွေကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ် ရမှာပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Do & Don’t (Rules) ဟု သတ်မှတ်ထားလို့ပါလေ။